ရင်ထဲက အကြွေး မီးတောက်ကြီး…သား လာငြိမ်းပေးလိုက်တာ – Shwe Thadin
ရင်ထဲက အကြွေး မီးတောက်ကြီး…သား လာငြိမ်းပေးလိုက်တာ
20/12/2021 T Z Knowledge 0
အဖွား အသက်(၇၆)နှစ်တဲ့ မြေးမလေးနှင့် ဒလမှာ နေပါတယ်။ မြေနီကုန်း တံတားအောက်လေးမှာ ရေသန့်လေးတွေ စံပယ်ပန်းလေးတွေ ရောင်းပါတယ်။ ရေသန့် တဗူး (၃၀၀)ကျပ်ပါ။
အဖွားမှာ အကြွေး (၁)သိန်း ရှိတယ်တဲ့…အိမ်ငှါးခက တလ (၃)သောင်းတဲ့..အကြွေးက နေ့ပြန်တိုး တနေ့ (၁)ထောင်ပေးရတယ်တဲ့…အဖွားရေ လာပါအုံးဗျ…သားလေး ရေသန့်ဝယ်မလို့လား??
(အဖွား အပြေးလေး လာခဲ့တယ်)ဟုတ် အဖွား ရေသန့်လေး ဝယ်မလို့…..(၂)ဗူး ယူမယ်နော်…(လက်ထဲ (၂)ဗူးတွေ့လို့)ကျေးဇူးပါ သားရယ်…..ရော့ အဖွား 120,000 Ks….(၁)သိန်းက အဖွား အကြွေး ဆပ်နော်…(၂)သောင်းက ရေသန့်ဗူးဖိုးနော်…ဟာ….သားရယ်….
အဖွား မနက်အစောကြီး ပျော်လိုက်တာ…ပြောမပြတတ်အောင်ပဲ…မသိတော့ပါဘူး ဝမ်းသာလိုက်တာ…ရပါတယ် အဖွားရယ်…..သားရယ်…အဖွား နေ့တိုင်း စိတ်ပူနေရတဲ့…ရင်ထဲက အကြွးမီတောက်ကြီးကို…ရေနဲ့ လာဖြန်းပြီ ငြိမ်းလိုက်သလို ခံစားရတယ်။
ဝမ်းသာလိုက်တာ…အဖွား ဒီနေ့ ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့…အကြွေး သွားဆပ်တော့မယ်…အဖွား အကြွေးတွေကင်းပြီ။ ဟုတ် အဖွား…သွားဆပ်လိုက်နော်…စောစောပြန်နားပြီ ဆပ်လိုက်နော်…ဆပ်မှာ သားရေ…အရမ်း ပျော်တာပဲ…
(လှူဒါန်းပေးကြတဲ့ (၇)ရက်သားသမီးများအား အဖွားကိုယ်စာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျ ) အော်…အဖွား ပျော်နေတာလေးကြည့်ပြီ… ကျနော်လဲ တနေကုန် ပျော်နေမိတယ်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါး အဖိုးအဖွားများအတွက် အတူအကွ ပူးပေါင်း ကူညီလှူဒါန်းလိုပါက ကိုပူတူးနှင့် ဘော်ဒါများ ဖုန်း 09-5408437 သို့ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင် ပါတယ်နော်…
အဖြား အသက္(၇၆)ႏွစ္တဲ့ ေျမးမေလးႏွင့္ ဒလမွာ ေနပါတယ္။ ေျမနီကုန္း တံတားေအာက္ေလးမွာ ေရသန္႔ေလးေတြ စံပယ္ပန္းေလးေတြ ေရာင္းပါတယ္။ ေရသန္႔ တဗူး (၃၀၀)က်ပ္ပါ။
အဖြားမွာ အေႂကြး (၁)သိန္း ရွိတယ္တဲ့…အိမ္ငွါးခက တလ (၃)ေသာင္းတဲ့..အေႂကြးက ေန႔ျပန္တိုး တေန႔ (၁)ေထာင္ေပးရတယ္တဲ့…အဖြားေရ လာပါအုံးဗ်…သားေလး ေရသန္႔ဝယ္မလို႔လား??
(အဖြား အေျပးေလး လာခဲ့တယ္)ဟုတ္ အဖြား ေရသန္႔ေလး ဝယ္မလို႔…..(၂)ဗူး ယူမယ္ေနာ္…(လက္ထဲ (၂)ဗူးေတြ႕လို႔)ေက်းဇူးပါ သားရယ္…..ေရာ့ အဖြား 120,000 Ks….(၁)သိန္းက အဖြား အေႂကြး ဆပ္ေနာ္…(၂)ေသာင္းက ေရသန္႔ဗူးဖိုးေနာ္…ဟာ….သားရယ္….
အဖြား မနက္အေစာႀကီး ေပ်ာ္လိုက္တာ…ေျပာမျပတတ္ေအာင္ပဲ…မသိေတာ့ပါဘူး ဝမ္းသာလိုက္တာ…ရပါတယ္ အဖြားရယ္…..သားရယ္…အဖြား ေန႔တိုင္း စိတ္ပူေနရတဲ့…ရင္ထဲက အႂကြးမီေတာက္ႀကီးကို…ေရနဲ႔ လာျဖန္းၿပီ ၿငိမ္းလိုက္သလို ခံစားရတယ္။
ဝမ္းသာလိုက္တာ…အဖြား ဒီေန႔ ျပန္ေရာက္ၿပီဆိုတာနဲ႔…အေႂကြး သြားဆပ္ေတာ့မယ္…အဖြား အေႂကြးေတြကင္းၿပီ။ ဟုတ္ အဖြား…သြားဆပ္လိုက္ေနာ္…ေစာေစာျပန္နားၿပီ ဆပ္လိုက္ေနာ္…ဆပ္မွာ သားေရ…အရမ္း ေပ်ာ္တာပဲ…
(လႉဒါန္းေပးၾကတဲ့ (၇)ရက္သားသမီးမ်ားအား အဖြားကိုယ္စာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဗ် ) ေအာ္…အဖြား ေပ်ာ္ေနတာေလးၾကည့္ၿပီ… က်ေနာ္လဲ တေနကုန္ ေပ်ာ္ေနမိတယ္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါး အဖိုးအဖြားမ်ားအတြက္ အတူအကြ ပူးေပါင္း ကူညီလႉဒါန္းလိုပါက ကိုပူတူးႏွင့္ ေဘာ္ဒါမ်ား ဖုန္း 09-5408437 သို႔ဆက္သြယ္လႉဒါန္းႏိုင္ပါတယ္ေနာ္…
လေးနှစ်သားလေးကကင်ဆာဖြစ်နေသည်ဆိုသောအခါ မပြုစုချင်လို့ မိခင်ဖြစ်သူကထွက်ပြေးသွား
ပိုက်ဆံရှိပြီလေ ဘာစားချင်လဲ မေးတော့….မုန့်ဟင်းခါးလေး စားချင်တယ်